Moped "अल्फा" (72 घन।): प्राविधिक विशिष्टताहरू
मोल्ड गरिएको "अल्फा" (72 क्यूबिक।) प्रकाश मोटरसाइकलका प्रशंसकहरू बीचको यातायातको सबैभन्दा सामान्य माध्यम हो। यो यस प्रविधिको मूल्य, यसको कार्यक्षमता र रखरखावको कारण हो। पारगमन, गति र एक सानो मात्रामा ईन्टरनेट, जुन यो यातायातमा ड्राइभिङको लागि आवश्यक छ, मोटोड "अल्फा" (72 क्यूबिक।) राख्नुहोस् जुन सबैभन्दा लोकप्रिय जापानी ब्रान्डहरूमा लोकप्रिय छ। यो आकस्मिक छैन, किनकि इन्जिनले यी लाइट मोटरसाइकलहरूमा खडा भएको फर्म फर्म होंडाबाट जापानी "क्युबा" को एक सटीक प्रतिलिपि हो, जुन AK-47 सँगको तुलनामा तुलनात्मक छ। सिंगल सिलेंडर इन्जिन 139 एफबीएम मात्रा 72 क्युबिक मीटर। सीएम सबै मौसम अवस्थाहरूमा काम गर्दछ र स्पेयर पार्ट्स को लगातार मरम्मत र प्रतिस्थापन को आवश्यकता छैन। प्राविधिक डाटाले यो चरम चरम अवस्थाहरूमा यो ट्राफिक प्रयोग गर्न सम्भव बनाउँछ, सहित ठण्डमा ड्राइभिङ, रेतमा र कुनै पनि सडकमा। यो रूसको लागि उत्तम लाइट मोटरसाइकल हो। ग्रामीण इलाकामा, तपाई प्राय: मोटोड "अल्फा" 72 घन्टी भेट्टाउन सक्नुहुन्छ। यो मोडेलको तस्बिर सजिलै पहिचान गर्न योग्य छ। सरल र संक्षिप्त डिजाइन, कम मूल्य, राम्रो गति, धैर्यता, रखरखाव, लाभप्रदता र अन्य फायदेहरुको संख्या - यो यातायातको यस प्रकारको प्रतिष्ठा हो।
अद्वितीय क्रस-देश क्षमता
हल्का मोटरसाइकल चलाउन रेकर्ड धारक एक मोटोटेड "अल्फा" (72 घन्टी।) हो। यसको इन्जिन, आयाम र वजनको विशेषताहरू निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। "अल्फा" मा कुनै पनि असक्षमता हटाउनको लागी हल्का वजनको कारण हो - 81 किग्रा। रेत र ग्याँसमा आत्मिक आश्वासन सुनिश्चित गर्न, यस्तो हल्का प्रविधिको लागि एक शक्तिशाली र भारी मोटरको आवश्यकता छैन। यदि गहिरो र चिपचिपा माछाको एक भागलाई पराजित गर्न आवश्यक छ भने, बालुवाको छेउमा खसेको चिसो, वा उचाइ धारा वा नदीमा पार गर्न, तपाई सधैँ मोप्ड बन्द गर्न सक्नुहुन्छ र तिनलाई सडकको कठिन भागसँग सामना गर्न मद्दत पुर्याउनुहुन्छ, यो एउटा साइकिल जस्तै अगाडि बढाएर।
यस तथ्यले गर्दा "अल्फा" को पाङ्ग्राहरू पतली छन्, तिनीहरू स्याउको वजन अन्तर्गत गीला बालुवामा झुन्ड्याउन सक्छन्। तर पछि को बिना, यो मोपाइड कुनै पनि अफ-रोड संग खींचन सकिन्छ, यसलाई कम रिवर्स मा पहिलो गियर मा इन्जिन को काम गर्न को लागी मदद गर्दछ। शहरी अवस्थाहरूमा, यदि आवश्यक भएमा, क्रस सीरी वा उच्च क्यान्सरहरू, "अल्फा" एक साधारण साइकल जस्तै उठ्न सकिन्छ। यसैले यो हल्का मोटरसाइकलको लागि सबैभन्दा टाढाको कोनेहरू जंगलमा उपलब्ध छन्, नदीको किनारमा, तपाईं केवल बाइकमा जान सक्नुहुन्छ। शिकार, मत्स्य पालन र मशरूम संग्रह गर्ने धेरै प्रशंसकहरू उनीहरूको कम वजनको कारणले यो मोप्पालाई प्राथमिकता दिन्छन्। भारी र अधिक शक्तिशाली वाहनों को लागि, जंगल मा गिरएको पेड ब्लक गरेको छ कि बाटो संग ड्राइव गर्न असंभव छ, र अल्फा को लागि कुनै समस्या छैन।
यस moped को लागि गति छत 70 किलोमीटर / घन्टा छ, जो राजमार्ग यातायात को लागि पर्याप्त छ। "अल्फा" को वजन सानो छ, र उच्च गति मा हैंडलिंग सावधानीपूर्वक हराएको छ। यस प्रविधिको केही प्रशंसकहरूले "अल्फा" (72 क्यूबिक मीटर) परिमार्जन गर्न प्रयास गर्छन्, थप शक्तिशाली पिस्टन, शून्य प्रतिरोध फिल्टर, वृद्धिको गियर अनुपातसँग ताराहरू, इग्निशन प्रणाली परिमार्जन गर्नुहोस्, यसलाई वक्रबाट अगाडि राख्नुहोस् र गतिमा90 किमी / घन्टासम्मको गति प्राप्त गर्नुहोस्। तर शहरको वरिपरिका सडकका साथ ट्राफिक जामहरू, सडक र उच्च गतिका क्षमताओंको मैदानमा साथमा सडक वरपरको आवागमनको लागि, अल्फा पर्याप्त यी सबै परिमार्जनहरू बिना पर्याप्त छ। यसको अतिरिक्त, बढ्दो शक्ति र गतिको साथ, धेरै चाँडो पहिला पहिला पहिला मोप्ड सुरुको धेरै महत्त्वपूर्ण भागहरू र विधानहरू।
"अल्फा" को डिजाइनले तपाईंलाई यसलाई "ठोस" इन्जिन विकल्पहरू स्थापना गर्न अनुमति दिन्छ, यसको लिटर 8 लीटर सम्म पुग्छ। संग। तर यी मोटर्सका साथ "अल्फा" लाई प्राय मरम्मत चाहिन्छ, दौडने गियरको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्वहरूको जीवन धेरै छोटो हुन्छ, र तिनीहरू खतरनाक कम्पन विनाश सुरु गर्छन्। एक बढी शक्तिशाली मोटरले अन्य संरचनात्मक तत्वहरूको ठूलो मात्रामा वृद्धि गर्न आवश्यक छ। यो धेरै फायदाहरूको हानि हुनेछ, विशेष गरी धैर्य र अर्थव्यवस्थामा, जसले "अल्फा" (72 घन्टी।) मोप गरेको छ। यी mopeds को गति विशेषताहरु को निर्माण र चल रहे गियर को प्रकाश र शक्ति संग पूरी तरिका संतुलित हुन्छ।
72-क्यूबिक चार-चक्र अल्फा इन्जिनको विश्वसनीयता र बेग्लैपनता जापानी विशेषज्ञहरु द्वारा विकसितको यसको आदर्श डिजाइनको कारण हो। यहां सम्म कि एक थोडा सरल संस्करण मा, सस्ता सामाग्री को उपयोग र एकाइ को गुणवत्ता को लागि सानो आवश्यकताहरु संग, ईन्जिन 139 एफएमएम को आश्चर्यजनक रूप देखि राम्रो तरिकाले काम गर्दछ, जो यसको सबै संरचनात्मक तत्वहरुको संतुलन को संकेत गर्दछ। यस मोटरको शक्ति मात्र5लीटर छ। एस, र प्रति मिनेट - 7500 प्रतिमा को अधिकतम संख्या। तथापि, चार गियर्स संग एक सुचारु-विचार-बाहिर ट्रांसमिशन को लागी धन्यवाद, अल्फा को इन्जिन पूरी तरिका को उनको सबै ट्रांसमिशन क्षमताओं को साधारण भार संग प्रतिलिपि गर्दछ।
मोटर डिजाइन धेरै सरल छ। सिलेंडर सिरमा दुई वाल्वहरू - इनलेट र आउटलेट। तिनीहरूको काम समय तालिकामा अवस्थित एक ठाउँमा प्रदान गरिएको छ, जसको घूर्णन श्रृंखला ट्रांजिङ्ग मार्फत म्यागनेटको साथ तुल्यकालिक हुन्छ। इन्जिनको बाँया छेउमा एक खुल्ला संचालित पट्टि लीवर छ, जो मोटर आवरणमा दुई समानांतर शाफ्ट मा घुसिएको गियरहरूको एक धेरै सरल प्रणाली नियन्त्रण गर्दछ। तेल पंप समय श्रृंखला बाट संचालित छ र क्रान्कशाफ्ट अन्तर्गत स्थित छ। क्रान्ककेस भित्र इन्जिनको दाहिने छेउमा एक क्लच इकाई हो, जुन एक लेवर द्वारा बायाँ ह्यान्डबारबारबाट आएर क्लच केबल प्रयोग गरेर नियन्त्रण गरिन्छ।
घरमा अल्फा इन्जिनको रोकथाम र मरम्मत
मोल्ड गरिएको "अल्फा" (72 घन मीटर।) को मोटर, कुनै पनि ट्राफिक जस्तै नियमित रखरखाव र मरम्मत आवश्यक छ। नियमित रूपमा तेल परिवर्तन यसको सञ्चालन लामो समयसम्म एक महत्वपूर्ण अवस्था हो। तेल परिवर्तन प्रक्रिया धेरै सरल छ। इन्जिन माथि फर्काउँछ, त्यसपछि बन्द हुन्छ, र क्र्रेनकेसी अन्तर्गत स्थित एक डिल प्वाइन्टको मद्दतले, खर्च गरिएको तेल तेल सजिलै संग क्रान्कोसबाट विशेष रूपमा निर्मित कन्टेनरमा हटाइन्छ। त्यसपछि एउटा नयाँ तेल खसेको छ। इन्जिनको सही अपरेसनको समायोजन कार्बोचर को समायोजनको साथ सुरु हुन्छ, जसको माध्यमबाट यो मिश्रणलाई समृद्ध बनाउन वा घटाउन सम्भव छ। यो नियमित रूपमा वाल्वको अपरेशन जाँच गर्न आवश्यक छ, 0.5 मिमी को विशेष जांच संग आवश्यक अंतराल स्थापना। प्रति सत्र दुई वा तीन पटक, यो समय चिनोको तनाव जाँच र यसको तनाव, रबड रोलर्स र ड्रेसरहरूको तन्त्रणाको अवस्था आवश्यक छ। अल्फा इन्जिनमा कुनै पनि ब्रेकडाउन सजिलै हटाउन सकिने छ। कर्षण हराउँदा, यो सिलेंडर हेड हटाउन आवश्यक छ र वाल्वको पूर्णता जाँच गर्नुहोस्। वाल्व फ्लोरिङ यस मोटरको सम्भावित ब्रेकडाउन मध्ये एक हो। आफ्नो कार्यक्षमता क्षमता पुनर्स्थापना गर्न, तिनीहरू सफा गरिनु पर्छ र पेस्टसँग पुन: घुमाउनुपर्छ। यो प्रक्रिया झाइलीको पुरानो मोडेलका धेरै मालिकहरु परिचित छ। जब टाइम चेन टूटेको छ, यो जेनरेटर रोटर हटाउन र ग्याँस वितरण प्रणालीको सबै तत्वहरू प्रतिस्थापन गर्न आवश्यक छ , र इकट्ठा हुँदा, जेनरेटर र टाइम स्टारको रोटर सिलिन्डरको सही स्ट्रोकसँग सिंक्रोनाइज गरिएको हुन्छ।
क्लच मौसममा एकपटक छुट्याइनु पर्छ र पेट्रोलमा धोइदिन्छ, जस्तै तेल र धातु पाउडरको चिपचिपा मिश्रणले भित्र भित्र जम्मा गर्दछ। इन्जिनको नियमित निरीक्षणको साथ, उचित समायोजन र भागहरु को प्रतिस्थापन को लक्षण को बदलन, 139 एफबीएम ले विश्वसनीय काम गर्नेछ। "अल्फा" (72 क्युबिक।) मरम्मत गरिरहेको छैन किनकि गम्भीर लगानीको आवश्यकता पर्दैन र सफलतापूर्वक कम से कम कौशल र घरहरुमा कौशल संग काम गर्न सकिन्छ।
भित्तामा 139मेगाबाइटको शक्ति बढाउनका लागि व्यञ्जन
Moped "अल्फा" इन्जिन शक्ति को बढाने को सबै भन्दा सामान्य तरीका एक प्रकार को पिस्टन समूह को एक ठूलो सिलेंडर भोल्यूम संग बदलन को लागि छ । सामान्यतया, यो प्रतिस्थापनले मोटरलाई शक्ति थप्दछ, तर मोपको गतिलाई धेरै असर पार्दैन। त्यहाँ अन्य तरिकाहरू छन्। सरलतम दोहोरी इग्निशन हो। तपाईं जनरेटर को रोटर शरीर मा स्थित किनारा मा एक कदम बनाउन सक्छन्, 0.5 मिमी को सतह को सतह देखि कटौती को किनारा, किनार देखि पहिले रोटर को काम को स्ट्रोक को समयमा सेंसर को छूता छ। यसले शक्तिमा वृद्धि 5-10% सम्म दिन्छ। तपाईं सेवन र निकास वाल्व व्यास वृद्धि गर्न सक्नुहुन्छ। गर्न को लागि, सिलिन्डर सिर मा छेद ड्रिल गर्न को लागि पिस्टन समूह 139 FMB ले ठूलो घन क्षमता संग व्यापक वाल्व को लागि ड्रिल। यो अपरेसनले 15-20% सम्मको वृद्धि बढाउँछ।
मोपोड को रखरखाव र मरम्मत
राजधानी "अल्फा" (72 घन मीटर) को कारणले गर्दा, राजधानी ब्रेकडाउनको कारणले पूर्णतया सफा गर्न सकिन्छ। मोप्ड मा चेन्ज हरेक सीजन पछि वा 2000 2000 किमी को दौड पछि बदलिनु पर्छ। चेन्ज धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, जसले दुवै ताराको पहल बढाउँछ। उच्च स्पीडमा चेन्ज विफलताको कारण, रियर को तेर्सो ब्लकिंग संग एक स्थिति हुन सक्छ, जुन खतरनाक गिरिखरी, चोटहरु र मोटरसाइकलमा अझ बढी क्षति लाग्न सक्छ। सडकमा, यस अवस्थाले तत्वहरूको विनाशको कारण रियर व्हील, गम्भीर विरूपण वा तनावको घेराको पूर्ण विनाशको कारणले गर्दा हुन सक्छ। चेन्जको कृत्रिम छोटो दुबै ताराहरू को तीव्र पहनामा योगदान गर्दछ।7000 किलोमिटर टायर पछि टायरले सडकमा टाँस र टाँसनको बललाई पूर्ण रूपमा पराजित गर्यो। तिनीहरूलाई 2-3 अपरेसन मौसम पछि परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। क्चच, ईन्धन आपूर्ति र अगाडिको चक्रको ब्रेक ड्रम नियन्त्रण गर्न केबलहरू प्रत्येक अपरेसन सिजनको विस्तारको कारणले छोटो हुनुपर्छ। ब्रेक ड्रममा रबर ब्यान्डहरू क्रमशः विकृत भएका छन्, जुन पाङ्ग्राहरूको खेल बढ्छ। तिनीहरू प्रत्येक अपरेसन सिजन पछि परिवर्तन गर्न पनि राम्रो छन्।
केहि moped विफलहरू यसको लोड असर तत्वहरूको विनाश संग जोड्न सकिन्छ। अल्फामा प्लास्टिक फ्रन्ट प्वाइन्टले धातुको भन्दा लामो काम गर्दछ, किनकी यो नकारात्मक कम्पनमा कम संवेदनशील छ। इन्जिनमा म्याग्दीले मार्जिनको कारणले पनि नष्ट गर्न सक्छ। यसबाट टाढाको लागि, तपाइँलाई उनीहरूमा व्यापक वाशरहरू वेल्ड गर्न आवश्यक छ। 2-3 सीजन पछि ब्याट्री यसको क्षमता को 50% सम्म हरािन्छ, यसैले यसको नियमित प्रतिस्थापन पनि वांछनीय छ। विद्युतीय क्लच सेन्सर र टर्न संकेतहरूको नियन्त्रण सामान्य मोडमा काम गर्नुपर्छ। ती आन्दोलनमा दुवै सुरक्षामा निर्भर गर्दछ, र स्विचन गतिको सही नियन्त्रण। अल्फा पहिरनमा सामान्य रियर झटका अवशोषकहरू , जुन रियर विङको भित्रको सतहमा रियर पाङ्ग्राको अचलनशील घर्षण हुन सक्छ। वहाँ "अल्फा" के लिए पीछे सदमे अवशोषक के लक्जरी संस्करण हैं, जो आपको पीछे की पहियों पर मोटी टायर लगाने की अनुमति देता है, क्योंकि उनके साथ आप मोटरसाइकिल के पीछे थोड़ा बढ़ा सकते हैं। फास्टनरहरूको सावधान ह्यान्डलिंगको साथ, यो moped को मरम्मत संग गम्भीर समस्याहरु सम्भव छैन।
एक moped "अल्फा" (72 घन।) चलिरहेको छैन धेरै समय लाग्दैन र सही परिणाम प्राप्त गर्न धेरै मुख्य शर्तहरू छन्। पहिलो हज़ार किलोमिटर दौडमा गति सीमासँग कडा रूपमा पालन गर्न आवश्यक छ, तपाईं इन्जिनलाई हटाउन सक्नुहुन्न, यसले 20 मिनेट भन्दा बढीको लागि अधिकतम पुनरावलोकनमा काम गर्दछ, र 500, 1000, 2000 र 5000 किलोमिटर पछि तेल परिवर्तन गर्न पनि बाध्य पार्न सक्दछ।
मोल्ड गरिएको "अल्फा" 72 घेराको अवलोकन। यसको प्रमुख परिमार्जन सूची बिना पूरा हुनेछैन। यस moped को लागि फ्रेम को दुई संस्करणहरु छन्। यो उच्च छ, ठूलो पेट्रोल टैंकको तल ठाँउ र कम, जहाँ पेट्रोल ट्यांक सानो छ, र माथिको यो ट्रंक हो। तिनीहरूको विशेषताहरु द्वारा, मोपोड को दुवै संस्करण लगभग एक समान हुनेछ, पेट्रोल टैंक को मात्रा र लैंडिंग ऊंचाई मा एक सानो रन आउट को अंतर को बाहेक। अल्फा धेरै चीनी निर्माताहरू द्वारा बनाईएको छ, त्यसैले एउटै मोडेलको लागि धेरै समानांतर नामहरू छन्। उदाहरणको लागि, एक मोटोटेड "ओम्याक्स अल्फा" 72 घिउ। एक शुद्ध चीनी संस्करण हो, र मोटोड "ओरियन" 72 घन। - चिनियाँ स्पेयर पार्ट्सबाट एउटी मोडेलको रूसी असेंबली "उद्यम" Velomotors मा गरिन्छ।
विधानका लागि विकल्पहरू
"अल्फा" (72 क्यूबिक।) को अवस्थित परिमार्जन केही डिजाईन तत्वहरूमा भिन्न हुन सक्छ। यो मोपोड को लक्जरी संस्करण पनि छन्। उदाहरण को लागी, एक मोटोटेड "अल्फा रेसर" 72 घन। गेटको अधिक प्रभावकारी र गतिशील रूप छ र ग्याँस ट्यांकको अन्य "एल्फ" उत्कृष्ट खेलको आकृतिको पृष्ठभूमिको विरुद्धमा उभिएको छ। वास्तवमा, यो एक moped को एक नै मोडेल हो। लक्जरी संस्करणहरुमा, हाइड्रोलिक रियर झटका अवशोषकहरू, अलार्महरू, प्लास्टिकको पखेटाहरू, थप आकर्षक सजावट तत्वहरू, टर्न सिग्नलहरू र रोशनीहरू अझ बढी महँगो हुन्छन्, महँगो रङहरू र छालाका तहहरू पनि। तर यो अझै पनि एउटै moped "अल्फा" 72 क्यूबिक हुनेछ।, त्यहि टेक्नोलोजी विशेषताहरु संग, तर 30% अधिक महंगी।
अगाडि साइकल स्विच सेट गर्दै
कोरियन मोटर्सस शंको
मोटरसाइकल होंडा CBR600RR - पागलपन को कगार मा
मोटरसाइकिलिंग: समीक्षाहरू। मोटरसाइकिलिंग ओएसए: समीक्षा
तपाइँको पहिलो मोटरसाइकल कसरी छान्नु हुन्छ?
चक्कु "Nox" - किफायती मूल्यहरु मा रूसी गुणस्तर
विज्ञापन अभियान - यो छ ... विज्ञापन अभियान को विकास। एक विज्ञापन अभियान को प्रभाव
Mixers AM-PM स्नान र स्नान: समीक्षा, वर्णन, मोडेल र समीक्षा
अक्टोबर जहाँ तातो: सबै भन्दा राम्रो ठाँउ आराम गर्न
बाल स्प्रेको लागि प्यान्ट। दाँतको संसारमा नयाँ।
प्रत्येक यात्रा बारे अद्यावधिक
Gudaut (अब्खाजिया): निजी क्षेत्र। अब्खाजिया, Gudauta - यात्री समीक्षा
"बरफ मा पाम रूखहरू": फिल्म अभिनय गर्ने कलाकार अभिनेताहरु
वंशानुगत रोग को रोकथाम के हो?
बुनना सिक्नुहोस्। चप्पल कसरी बुनना गर्न? असामान्य, न्यानो र सुन्दर।
उपहार वयस्क छोराको जन्मदिन: रोचक विचार